Ulawulo lwamavolontiya - Isisa Slideshows
Malunga noLawulo lwamaVolontiya
Ukuba ubandakanyeka ekusebenzeni kombutho ongenzi nzuzo, ulawulo lwamavolontiya yinxalenye ebalulekileyo yomsebenzi wakho. Xa uthembele kwinkonzo yamavolontiya, kubalulekile ukugaya, ukugcina, kunye nokulawula abantu abanikela ngesisa ngexesha labo kunye neetalente zabo.
Ukuqinisekisa ukuba amavolontiya akho anezakhono eziyimfuneko ukuze agqibe imisebenzi oya kuthi uthembele kuyo ukuze ayenze yinto ebalulekileyo kulawulo lwamavolontiya olusebenzayo.
Ukucwangcisa kunye nabasebenzi
Omnye wemisebenzi ebalulekileyo yolawulo lwamavolontiya kukucwangcisa. Ukuba kunyanzelekile ukuba ube namavolontiya ngamaxesha athile ukufezekisa iindima ezahlukeneyo, kubalulekile ukwenza isicwangciso sokuqesha. Oku kubandakanya ukuchonga iimfuno zabasebenzi, ukugaya amavolontiya ukuzalisa iindawo ezivulekileyo, kunye nokuqinisekisa ukuba amanqanaba abasebenzi anele ngamaxesha onke.
Xa abantu babelana ngexesha labo nombutho wakho wesisa, kubalulekile ukuba ulandele iiyure abazichitha kwinkonzo. Oku kunokunceda ukuxhasa izicelo zesibonelelo kunye nezicelo zenkxaso-mali kwiziko lakho, kunye nokubonelela ngesiseko sokuvuma amavolontiya ngenkonzo ebalaseleyo.
Abasebenzi bokuzithandela abanakulindelwa ukuba bazilawule ngaphandle kolawulo kunye nolwalathiso. Umntu othile kufuneka abe noxanduva lokongamela iqela lombutho wamavolontiya.
Yonke imibutho engenzi nzuzo kufuneka ibe nenkqubo eyenzelwe ukugcina amavolontiya. Iinkqubo ezifanelekileyo zokugcina zibandakanya ukuvumela amavolontiya ukuba abe negalelo kwiindidi zemisebenzi abayenzayo, ukubonelela ngamathuba okukhula, ukubonisa uxabiso, kunye nokunye.
Ukuqwalaselwa kunye noxabiso
Abo banoxanduva lokulawulaimibutho yesisakunye nokusingatha imisebenzi yolawulo lwamavolontiya akufuneki kulityalwe ukubaluleka kokuqinisekisa ukuba abobanikele ngexesha laboyazi ukuba zininzi kangakanani iinzame zabozixatyisiwe kwaye zixatyisiwe.
Iindawo Ezihlanganisiweyo Ihambelana Astrological Signs San Francisco Iindawo Zokutyela Horoscopes Slideshows Ngaphakathi Design Basics
Kuthatha ixesha elingakanani ukubhaka inyama yenyama
inja ingathatha i-aspirin engakanani
Uluhlu oluprintwayo lwabongameli ngokulandelelana
Ngubani umbhali othengisa kakhulu ngalo lonke ixesha
Ndazi njani ukuba inja yam iyafa